Olee Ebe Ndị Mmadụ Weere Ka Ebe Nsọ? Ndị Kraịst Hà Kwesịrị Ịna-efe Chineke n’Ebe Ndị E Weere Ka Ebe Nsọ?
Ụlọ Nche | Nke 2 n'Afọ 2016
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Javanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mixe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndonga Ngabere Nias Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Tetun Dili Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Ndị Kraịst Hà Kwesịrị Ịna-efe Chineke n’Ebe Ndị E Weere Ka Ebe Nsọ?
N’AFỌ ọ bụla, ihe karịrị nde mmadụ isii na-aga n’otu oké ọhịa osisi sida juru, nke dị́ n’obodo a na-akpọ Shima Peninsula na Japan. Ndị okpukpe Shinto rụụrụ chi ha ụlọ n’ebe ahụ. Chi a bụ chi anyanwụ nke nwaanyị. Aha ya bụ Amaterasu Omikami. O ruola ihe dị ka puku afọ abụọ ndị Shinto fewere chi a. Ọ na-abụ ndị na-efe chi a bịarute, ha ebu ụzọ kwọọ aka ha, saakwa ọnụ ha iji dị ọcha. Ha na-eguzorozi n’ihu ụlọ arụsị ha na-akpọ isiala, na-akụ aka, na-ekpekukwa chi nwaanyị ha ekpere. * Ndị Shinto ewereghị na o nwere ihe o mere ma ndị òtù ha nweekwa okpukpe ọzọ ha na-ekpe. Ụfọdụ ndị na-ekpe okpukpe Buda, na ndị sị na ha bụ Ndị Kraịst, nakwa ndị na-ekpe okpukpe ndị ọzọ ewereghịkwa na o nwere ihe o mere ma ha gaa n’ihu arụsị ndị Shinto soro ha fee chi ha.
Ọtụtụ okpukpe ndị a ma ama n’ụwa nwere ebe ndị ha weere na ha dị nsọ, * ọtụtụ nde mmadụ na-agakwa ebe ndị ahụ. N’obodo ebe ọtụtụ ndị sị na ha bụ Ndị Kraịst, e nwere ọtụtụ chọọchị ndị a rụrụ na ebe ndị a kpụrụ ihe dị iche iche sị na e nyefere ha Jizọs, Meri ma ọ bụ ndị nsọ. E nwekwara ndị nke na-arụ chọọchị ha n’ebe ihe ụfọdụ a kọrọ na Baịbụl mere ma ọ bụ n’ebe a sị na a nọ rụọ ọrụ ebube n’oge ndị na-adịbeghị anya ma ọ bụkwanụ n’ebe e dowere ihe ndị a kpụrụ akpụ e ji echeta ndị a sị na ha dị nsọ. Ọtụtụ ndị na-aga n’ebe e weere ka ebe nsọ n’ihi na ha kweere na Chineke ga-aka anụ ekpere ha ma ha nọrọ ebe ahụ kpee ya. Ndị ọzọ na-ewere ya na ịgba mbọ soro gaa ala nsọ na-egosi na ha ejighị okpukpe ha egwu egwu.
Foto ndị gara n’ebe ndị Shinto rụụrụ chi ha ụlọ n’ebe a na-akpọ Ise na Japan, nakwa n’ebe a kpụrụ Meri n’ime ọgba dị́ na Luude dị́ na Frans
Chineke ọ̀ ga-aka anụ ekpere anyị ma anyị kpee ya n’ebe e weere ka ebe nsọ? Ọ̀ na-amasị Chineke ma mmadụ gaa n’obodo a sị na ọ dị nsọ iji fee ya? Ndị Kraịst hà kwesịdịrị ịna-aga efe Chineke n’ebe ndị ahụ? Anyị mata azịza ajụjụ ndị a, ọ ga-enyere anyị aka ịmata ma ọ̀ dị mma ịga fee Chineke n’ebe ndị ahụ, matakwa otú Chineke chọrọ ka anyị si na-efe ya.
FEE CHINEKE “N’IME MMỤỌ NA N’EZIOKWU”
Gịnị ka Jizọs bu n’uche mgbe ọ sịrị na anyị ga-efe Chineke “n’ime mmụọ na n’eziokwu”?
E nwere otu oge Jizọs si n’obodo Sameria na-agafe, kwụsịtụ ka o zuru ike n’olulu mmiri dị́ nso na Saịka. Ka ọ nọ n’ebe ahụ, otu nwaanyị Sameria bịara isere mmiri, Jizọs ebido kpanyewere ya ụka. Ihe Jizọs gwara nwaanyị a ga-enyere anyị aka ịghọta otú Chineke si ewere ịga fee ya n’ebe e weere ka ebe nsọ. Ka ha na-akparịta ụka, nwaanyị ahụ gwara Jizọs otu ihe dị ezigbote iche n’otú ndị Juu si efe Chineke na otú ndị Sameria si efe ya. Ọ sịrị: “Nna nna anyị hà fere Chineke n’ugwu a; ma unu na-ekwu na ọ bụ na Jeruselem ka ndị mmadụ kwesịrị ịnọ fee Chineke.”—Jọn 4:5-9, 20.
Ugwu nwaanyị ahụ na-ekwu okwu ya bụ Ugwu Gerizim. Ọ dị ihe dị ka kilomita iri ise ma e si ebe ugwu Jeruselem gawa ya. O nwere oge ndị Sameria rụrụ ụlọ nsọ n’ebe ahụ, na-agakwa na ya eme Ememme Ngabiga na ememme ndị ọzọ. Ma, Jizọs esoghị nwaanyị ahụ rụwa ụka gbasara ebe e kwesịrị ịnọ na-efe Chineke. Kama, ọ gwara ya, sị: “Nwaanyị, kwere ihe m na-ekwu, oge awa na-abịa mgbe ọ na-agaghị abụ n’ugwu a ma ọ bụ na Jeruselem ka unu ga-anọ fee Nna m ofufe.” (Jọn 4:21) Ihe a Jizọs kwuru nwere ike ịtụ nwaanyị ahụ n’anya, karịchaa, maka na Jizọs n’onwe ya bụkwa onye Juu. Gịnị ga-eme ka a kwụsị ịna-aga n’ụlọ nsọ Jeruselem efe Chineke?
Jizọs kwukwara, sị: “Oge awa na-abịa, ọ bụkwa ugbu a, mgbe ndị na-efe ezi ofufe ga-efe Nna m n’ime mmụọ na n’eziokwu, n’ihi na, n’ezie, Nna m na-achọ ka ndị dị otú ahụ fee ya ofufe.” (Jọn 4:23) Kemgbe ọtụtụ narị afọ, ndị Juu weere na agadaga ụlọ nsọ ahụ dị́ na Jeruselem ka bụ ebe onye ọ bụla ga na-abịa efe Chineke. Ha na-aga ebe ahụ ugboro atọ n’afọ achụrụ Jehova Chineke ha àjà. (Ọpụpụ 23:14-17) Ma, Jizọs kwuru na ihe ndị a niile ga-akwụsị, nakwa na “ndị na-efe ezi ofufe” ga-efe Chineke “n’ime mmụọ na n’eziokwu.”
Ụlọ nsọ ndị Juu bụ ụlọ a na-ahụ anya, nke nwere ebe ọ dị. Ma, mmụọ na eziokwu abụghị ihe a na-ahụ anya, nke a ga-asị lekwa ebe ha dị. Ihe Jizọs na-ekwu bụ na ezigbo Onye Kraịst agaghị enwe ebe o weere ka ebe nsọ ọ ga-anọ na-efe Chineke, ma ọ̀ bụ n’Ugwu Gerizim, ma ọ bụ n’ụlọ nsọ dị́ na Jeruselem, ma ọ bụkwanụ n’ebe ọ bụla ọzọ.
Jizọs gwakwara nwaanyị Sameria ahụ na “oge awa” a ga-enwe mgbanwe n’otú ha si efe Chineke “na-abịa.” Olee mgbe oge awa ahụ bịara? Ọ bịara mgbe Jizọs ji ndụ ya chụọ àjà nke mere ka otú Iwu Mozis kwuru ka ndị Juu si na-efe Chineke gharazie ịdị ire. (Ndị Rom 10:4) Jizọs kwukwara na ‘oge awa ahụ bụ ugbu a.’ Gịnị mere o ji kwuo otú ahụ? Ọ bụ n’ihi na yanwa, bụ́ Mesaya ahụ, ebidola ịkpọkọta ndị na-eso ụzọ ya, bụ́ ndị ga-eme ihe ọzọ o kwuru. Jizọs sịrị: “Chineke bụ Mmụọ, ndị na-efe ya ofufe ga-efe ya ofufe n’ime mmụọ na n’eziokwu.” (Jọn 4:24) Oleezi otú anyị ga-esi na-efe Chineke n’ime mmụọ na n’eziokwu?
Mgbe Jizọs kwuru na anyị ga-efe Chineke n’ime mmụọ, ihe ọ na-ekwu bụ na mmụọ nsọ Chineke ga na-eduzi ihe anyị na-eme. Otu ụzọ mmụọ nsọ si eduzi anyị bụ inyere anyị aka ịghọta ihe dị n’Akwụkwọ Nsọ. (1 Ndị Kọrịnt 2:9-12) Eziokwu Jizọs na-ekwu okwu ya bụ eziokwu ndị dị na Baịbụl. Ihe ọ pụtara bụ na anyị chọọ ka Chineke nabata ofufe anyị, anyị agaghị efe ya n’ebe e weere ka ebe nsọ, kama, anyị ga-ahụ na anyị na-efe ya otú Baịbụl kwuru, kwekwa ka mmụọ nsọ ya na-eduzi anyị.
OTÚ NDỊ KRAỊST SI ELE EBE NDỊ MMADỤ NA-AKPỌ EBE NSỌ ANYA
Oleezi otú Ndị Kraịst kwesịrị isi na-ele ịga ala nsọ anya? Oleekwa otú ha kwesịrị isi were ife Chineke n’ebe a sị na ọ bụ ebe nsọ? Anyị cheta na Jizọs kwuru na ndị na-efe Chineke ezi ofufe ga-efe ya n’ime mmụọ na n’eziokwu, ọ ga-edo anyị anya na mmadụ ịga ebe ndị ahụ iji fee Nna anyị nke eluigwe abụghị ya ga-eme ka ọ nabata ofufe ya. Ihe ọzọkwa bụ na Baịbụl gwara anyị otú Chineke si ele iji ihe a kpụrụ akpụ efe ya ofufe anya. Baịbụl kwuru, sị: “Gbaaranụ ikpere arụsị ọsọ” nakwa “kpacharanụ anya ka unu ghara ikpere arụsị.” (1 Ndị Kọrịnt 10:14; 1 Jọn 5:21) N’ihi ya, ezigbo Onye Kraịst agaghị anọ n’ebe ọ bụla e weere ka ebe nsọ fee Chineke ma ọ bụ ebe e nwere ihe ndị a kpụrụ akpụ a sị na e ji efe ya.
Ma, ihe a e kwuru apụtaghị na Baịbụl akwadoghị mmadụ inwe ebe o nwere ike ịga kpee ekpere, mụọ ihe ma ọ bụ tụgharịa uche. Ọ dịghị njọ ma Ndị Kraịst na-ezukọ ebe ọ bụla dị́ mma n’anya mụọ gbasara Chineke. Ọ dịghịkwa njọ ide ihe n’ili mmadụ iji na-echeta onye ahụ ma ọ bụ iji gosi na a hụrụ ya n’anya. Ma, anyị ga-eburu n’uche na iwere ebe ndị dị otú ahụ ka ebe nsọ ma ọ bụ ife ihe ndị e dowere na ha ofufe adabaghị chaa chaa n’ihe Jizọs kwuru.
Ihe a na-ekwu bụ na ịga ebe ndị e weere ka ebe nsọ nọrọ kpee ekpere abụghị ya ga-eme ka Chineke nụ ekpere gị. Ọ bụghịkwa ịga n’ebe ndị dị otú ahụ ga-eme ka Chineke hụ gị n’anya ma ọ bụ gọzie gị. Baịbụl gwara anyị na Jehova Chineke, ‘Onyenwe eluigwe na ụwa, adịghị ebi n’ụlọ nsọ ndị e ji aka wuo.’ Ma, nke a apụtaghị na anyị enweghị ike ịbịaru Chineke nso. Anyị nwere ike ikpe ekpere n’ebe ọ bụla anyị nọ, Chineke anụ ya, n’ihi na “ọ nọghị n’ebe dị anya n’ebe onye ọ bụla n’ime anyị nọ.”—Ọrụ Ndịozi 17:24-27.
^ para. 2 Otú ndị Shinto si efe chi ha n’otu ihu arụsị nwere ike ịdị iche n’otú ha si efe ya n’ihu arụsị ọzọ.
^ para. 3 Gụọ igbe isiokwu ya bụ “ Olee Ebe Ndị Mmadụ Weere Ka Ebe Nsọ?”
Olee Ebe Ndị Mmadụ Weere Ka Ebe Nsọ?
E nwere ebe dị iche iche ndị mmadụ weere na ha dị nsọ. Ha na-anọ ebe ndị ahụ efe chi ha ma ọ bụ onye ha weere na ọ dị nsọ. Ha na-edowekarị ihe oyiyi na ihe ndị a kpụrụ akpụ na ha. Ha kweere na o nwere otú ihe ndị ahụ si gbasa ọrụ ebube ndị a rụrụ, ọhụụ ndị a hụrụ, ma ọ bụ ebe ndị a sị na a nọ hụ ndị mmụọ. Ụfọdụ ndị na-ewere ụlọ chọọchị ha ma ọ bụ obere ụlọ ndị ọzọ ha rụrụ ka ebe nsọ. Ụfọdụ ndị ọcha na ndị isi ojii na-enwe ụdị ebe ndị a n’ụlọ ha, nọrọ na ya na-ekpe ekpere, na-atụgharị uche, ma ọ bụ na-achụrụ chi ha àjà.
E nwere ebe ụfọdụ e dowere ihe a kpụrụ akpụ, ma e bughị n’obi ka a nọrọ na ha fewe ofufe. Dị ka ihe atụ, n’ụwa niile, ezinụlọ ụfọdụ na ndị ndị enyi ha nwụrụ n’ihe mberede okporo ụzọ na-akpụkarị ihe n’akụkụ ụzọ, jiri ya na-echeta onye ahụ. E nwekwara ebe ndị a na-akpụ ihe ụfọdụ iji na-echeta agha a lụrụ ma ọ bụ ndị nwụrụ n’agha ma ọ bụkwanụ n’ọdachi ọ bụla ọzọ merenụ. Ọ bụ eziokwu na ndị mmadụ nwere ike ịnọ ebe ahụ cheta ihe ahụ merenụ, beekwa àkwà, a na-ejikarị ihe ndị ahụ ndị mmadụ na-akpụ ama ihe ndị ha kweere.
Ànyị Kwesịrị Iji Ihe Oyiyi Efe Chineke?
Ọ̀ ga-ewe Chineke iwe ma anyị jiri ihe oyiyi ma ọ bụ arụsị fee ya?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ndị Kraịst Hà Kwesịrị Ịna-efe Chineke n’Ebe Ndị E Weere Ka Ebe Nsọ?
ISIOKWU TETA! A Ihe Ndị A Kọrọ Gbasara Jizọs Hà Mere Eme n’Eziokwu?
ISIOKWU TETA! A Gịnị Mere Jizọs Ji Taa Ahụhụ ma Nwụọ?
E Mee Ngwa Ngwa, E Meghara Ọdachi
Ònye Tinyere Isiakwụkwọ na Amaokwu Ndị Dị́ na Baịbụl?
Ònye Bụ Ekwensu?
Jizọs Ọ̀ Nwụrụ n’Elu Obe?
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere ỤLỌ NCHE Gịnị Mere Jizọs Ji Taa Ahụhụ ma Nwụọ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ ỤLỌ NCHE Gịnị Mere Jizọs Ji Taa Ahụhụ ma Nwụọ?
Gịnị Mere Jizọs Ji Taa Ahụhụ ma Nwụọ?
ỤLỌ NCHE Gịnị Mere Jizọs Ji Taa Ahụhụ ma Nwụọ?